Sida loo Beddelaan Video inay HTML5 Video Qaabka on Mac (Mavericks ka mid ah)
> Resource > Mac > Sida loo Beddelaan Video inay HTML5 Video Qaabka on Mac (Yosemite ka mid ah)
Ma rabtaa in aad loogu badalo video in HTML5 qaab video qaybsiga aad jeceshahay ama guriga lagu videos on qaar ka mid ah goobaha HTML5 sida YouTube? Dhab ahaantii, HTML5 qaab video waa qaab WebM ie, qaab video-audio loogu talagalay HTML5 video leh sifo ee qeexitaanka sare iyo size ka dheregtaan yar oo a. Haddii aad u baahan tahay si loogu badalo video for heerka HTML5, Waxaan ku talinaynaa in si sahlan loo isticmaali HTML 5 Video Converter, taas oo si toos ah aad bixisaa WebM "qaab saarka doorasho.
Marka laga reebo diinta HTML5 qaab video ka mid ah qaab kale oo video, taasi oo awood badan Video Converter u Mac (Mountain Libaaxa taageeray) ayaa sidoo kale u bedeli karaan HTML5 videos, sida YouTube HTML5 videos, inay qaab kale sida MP4, AVI iwm si fudud oo dhaqso.
Tani waxay halkan article inta badan aad u muujinaysaa sida ay u badalaan videos qaababka HTML5 (kuwaas oo WebM) arrintan smart HTML 5 Video Converter talaabo talaabo ah.
Talaabada 1: Download, rakibi iyo abuurtaan HTML 5 Video Converter on Mac OS X
Labada version Intel iyo version PowerPC waxaa laga heli karaa halkan. Just dooro version saxda ah ee processor Mac inaad kala soo baxdo. Haddii aadan aqoon oo ka mid ah waa joog, waxaad riixi kartaa Apple ah "icon, dooro About this Mac" doorasho si aad u hubiso processor.
Ka dib markii in, aad u baahan tahay si loo soo dajiyo iyo waxa maamula.
Talaabada 2: Import videos aad rabto in aad si loogu badalo
Hadda, waxaad u baahan tahay in ay soo dhoofsadaan videos in HTML 5 Video Converter. Just u tag File "> dar Media Faylal ay" ka menu ugu weyn ee ay caleenta iyo shuban videos aad rabto. Haddii kale, waxaad si toos ah u soo jiidi kartaa videos barnaamijka.
Talaabada 3: Dooro WebM sida qaab wax soo saarka
Riix labanlaab kor-arrow hoose ee Murayaad barnaamijkan ee in la furo guddiga wax soo saarka, ka dibna tag Video tab uu u qaado WebM sida qaab wax soo saarka.
Si aad u hesho files wax soo saarka si fudud oo dhaqso, waxa kale oo aad sameyn kartaa buugga wax soo saarka. Just guji Output bidix hoose ee suuqa kala barnaamijka oo taga, waayo.
Talaabada 4: Beddelaan Video inay WebM on Mac OS X (Mountain Libaaxa taageeray)
Hadda, aad u yimaadeen inay tallaabo la soo dhaafay, ka dhacay Beddelaan si ay u bilaabaan diinta HTML5 video ka mid ah qaab kale video. Geedi socodka aad qaadan doontaa waqti qaar ka mid ah, taas oo inta badan ku xiran tahay tirada oo dhan video files laga keeno iyo waxqabadka your computer Mac.
10 Sababo aad waa in aan dayactir ku si Mac OS X El Capitan 10.11